जेल सहायकले के काम गर्दछ | गठन र अध्ययन
सुधारात्मक सहायकले कस्ता कार्यहरु गर्दछ?
मारिया जोस रोल्डन | | विपक्षहरू, काम बन्द गर्नुहोस्
दण्डात्मक संस्थाहरुमा सहायक को काम राम्रो संग जनसंख्या भित्र ज्ञात छैन, एक दण्ड केन्द्र को अन्य शुल्क संग। सहायक को मामला मा, यो भनिएको छ कि उसको काम penitentiary को उचित कामकाज को सम्बन्ध मा काफी महत्वपूर्ण छ।
काम धेरै राम्रो भुक्तान गरीएको छ र वास्तविकता मानिसहरु के सोच्दछन् र फिल्महरुमा देखीन्छ त्यो भन्दा टाढा छ। यो भन्न सकिन्छ कि सुधार संस्थाहरु को सहायक को स्थिति मा केन्द्रित छ सम्भावित समस्याहरु को समाधान गर्नुहोस् कि कैदी आफ्नो दैनिक जीवन मा सामना गर्न सक्छ।
1 आवश्यकताहरु र penitentiary संस्थाहरु को सहायक को स्थिति को लाभ
2 क्षेत्रहरु कि penitentiary संस्थाहरु को सहायक को स्थिति शामिल छ
आवश्यकताहरु र penitentiary संस्थाहरु को सहायक को स्थिति को लाभ
कर्मचारीहरु संग जोड्ने मानिसहरु कैदीहरु को समस्या को समाधान खोज्न को लागी जिम्मेवार र पर्याप्त ग्रहणशील को रूप मा आवश्यकताहरु को एक श्रृंखला पूरा गर्नु पर्छ। अर्कोतर्फ, यो आवश्यक छ कि सख्ती बाट घेरा को वरिष्ठ अधिकारीहरु को विभिन्न आदेशहरु संग अनुपालन। निस्सन्देह, यी प्रकारका अधिकारीहरुलाई कैदीहरुको अधिकार र कर्तव्यहरु र केन्द्र मा शासन गर्ने नियमहरु संग सम्बन्धित सबै कुरा थाहा हुनुपर्छ।
एक जेल सहायक को रूप मा काम गर्दा लाभ को लागी, उनीहरु निम्न छन्:
एक सार्वजनिक अधिकारी हुनु, जागिर एकदम स्थिर र जीवन को लागी हो।
तलब जेल सहायकहरु को महान आकर्षण को एक हो। तपाइँ प्रति महिना २,२०० यूरो सकल कमाउनुहुन्छ, को श्रेणी को लागी यो सम्बन्धित को लागी एक धेरै उच्च तलब भएको।
अनुसूची यस स्थिति को महान लाभ को एक अर्को मान्न सकिन्छ। यो स्थिति मा काम गर्ने व्यक्ति हप्ताको ४० घण्टा सम्म पुग्न सक्दैन। विशेष गरी, त्यहाँ लगभग ३ hours घण्टा एक हप्ता हो कि एक साथ समूहीकृत गर्न सकिन्छ र यस तरीका बाट एक दिन एक हप्ता को लागी मुक्त हुन सक्षम छन्।
क्षेत्रहरु कि penitentiary संस्थाहरु को सहायक को स्थिति शामिल छ
माथि उल्लेखित निकाय भित्र, त्यहाँ विशिष्ट क्षेत्रहरु को एक श्रृंखला हो जहाँ सहायक एक अर्का को विशेषताहरु संग गतिविधिहरु को एक सेट को बाहिर ले जाने छन्:
क्षेत्रहरु को पहिलो बाह्य निगरानी भनिन्छ। यो जेल भित्र कामदारहरु को सबै भन्दा ठूलो समूह हो र यसको कार्य निगरानी र केन्द्र को कैदीहरु को नियन्त्रण को लागी हो। बारी मा, उनीहरुलाई दुई समूह मा विभाजित गर्न सकिन्छ:
एक V1 भनिन्छ र उनीहरु सामान्यतया बर्ष को हरेक दिन शिफ्ट र घुमाउरो काम गर्दछन्। उसको तलब सबै कामदारहरु मध्ये सबैभन्दा उच्च हो र उसको काम अरु कोहि छैन जेल भित्र व्यवस्था कायम राख्नु र कैदीहरु लाई स्थापित मापदण्ड को पालना सुनिश्चित गर्नु।
दोस्रो समूह V2 हो र उनीहरु सामान्यतया राती काम गर्दैनन्। उनीहरु V1 को मामला मा धेरै कम वेतन हो र उनीहरुको काम केन्द्र को ती क्षेत्रहरु को मोड्युल बाहिर छन् कि निगरानी गर्न को लागी हो। जस्तै आराम कोठा वा खेल कक्षा को मामला हो।
क्षेत्रहरु को दोस्रो मिश्रित भनिन्छ। जसरी नामले सुझाव दिन्छ, यी कामदारहरुले प्रशासनिक कार्यहरु गर्नेछन् यद्यपि उनीहरु कैदीहरु संग सीधा सम्पर्क राख्छन्। उनीहरु केन्द्रको भान्छा वा विभिन्न सुविधाहरु को रखरखाव संग सम्बन्धित कार्यहरु गर्न सक्छन्। यी कामदारहरुको तलब पहिलो क्षेत्र को तुलना मा धेरै कम छ।
तेस्रो क्षेत्र कार्यालय को काम लाई जनाउँछ, तसर्थ, यसका कामदारहरु विशेष रूप बाट प्रशासनिक गतिविधिहरु र बाहिर ले उनीहरु कैदीहरु संग कुनै सीधा सम्पर्क छैन। उनीहरु केन्द्र भित्र छैनन् र उनीहरुको पारिश्रमिक कैदीहरु संग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने कामदारहरु को तुलना मा धेरै कम छ।
अन्ततः, एक जेल सुविधा सहयोगी को काम फिल्ममा देखा पर्ने के साथ कम गर्न को लागी छ। यो एक कम खतरनाक काम हो भन्दा यो पहिलो नजर मा लाग्न सक्छ, यद्यपि समय समयमा समय जोखिमहरु छन्। तलब साँच्चै आकर्षक छ र त्यहाँ केहि कमियां छन् कि यस्तो स्थिति मा राख्न सकिन्छ। यदि यो पर्याप्त थिएन, राज्य सामान्यतया स्थानहरु को एक ठूलो संख्या हरेक बर्ष प्रदान गर्दछ, त्यसैले तपाइँ को लागी कुनै बहाना छैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: गठन र अध्ययन » अध्ययन » काम बन्द गर्नुहोस् » सुधारात्मक सहायकले कस्ता कार्यहरु गर्दछ?
मेरो नाम सान्द्रा हो, नोट धेरै रोचक छ, तर धेरै संक्षिप्त छ, म जेल सहायक को भूमिका को व्याख्या गर्ने तपाइँको तरीका संग सहमत छैन। म अर्जेन्टिना गणतन्त्र बाट हुँ, म बीस बर्ष को लागी एक जेल एजेन्ट भएको छु, यहाँ हामी माथि उल्लेखित कार्यहरु को सबै प्रकार को पूरा गर्छौं, तलब यो धेरै कम छ कि यो सामान्य मा नाम मा शुरू मा, या त आन्तरिक र / वा बाह्य गार्ड, प्रशासनिक, शिक्षकहरु, स्वास्थ्य पेशेवरहरु, र पनि समारोह मा पदानुक्रम मा निर्भर गर्दछ। यो एक काम हो जहाँ एक सेवा को लागी एक पेशा छ, तर यो फिल्महरु मा देखाइएको छ बाट बच्न सक्दैन, किनकि फिल्महरु केहि तरिका मा वास्तविकता देखाउँछन्। उसको नोट मा उसले यो गरीरहेको छ कि यो एक उत्तम मूल्य मा एक पर्यटक गाइड थियो, तर वास्तविकता फरक छ। हामी कुरा गरीरहेका छौं कि मानिसहरु ती हुन् जो त्यहाँ बसेका छन्, उनीहरुको समस्या र द्वन्द्व संग र एक एक एजेन्ट को रूप मा, जिम्मेवारी, समर्पण, व्यवसाय, नियमहरु लाई लागू गर्नु पर्छ तर सबै भन्दा माथि कानून, सम्मान र ईमानदारी संग।
एक जेल अधिकारी को रूप मा, मेरो मुख्य काम जेल भित्र कैदी को जीवन को रक्षा गर्न को लागी जब सम्म न्यायाधीश उनको रिहाई को नियम हो।
अंग्रेजी को स्तर के हो?
कम्प्युटर इन्जिनियर के गर्छ?